စာပေချစ်မြတ်နိုးသူများတိုင်း ဖတ်သင့်သောစာအုပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စာပေချစ်မြတ်နိုးသူများတိုင်း ဖတ်သင့်သောစာအုပ်
Posted by manawphyulay on Sep 25, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 28 comments
ခုတစ်လော ဘာမှမရေးဖြစ်သလို အရင်က စာမဖတ်ရင်မနေတတ်တဲ့ ကျွန်မ၊ ခုတော့ ဘာမှလည်းမလုပ်ချင်၊ ဘာမှလည်းမဖတ်ချင်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘာမှမလုပ်ပဲနေကြည့်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် စာမဖတ်ပဲ အိပ်မပျော်တဲ့အတွက် စာလေးတော့ နည်းနည်းဖတ်ဖြစ်တယ်။ စာဖတ်ရင်းလည်း တွေးနေမိသေးတယ်။ စာအုပ်ခေတ်ကုန်တော့မည်လားလို့ လူအများအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေချိန် ကျွန်မကတော့ စာဖတ်ရင် လက်ကကိုင်ပြီး ဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုတော့ ခုထိမဖျောက်နိုင်သေးပါဘူး။ လူတော်တော်များများက အင်တာနက် အသုံးပြုရင်း အီးဘုတ်တို့ PDF ဖိုင်နဲ့စာအုပ်တွေ ဖတ်တယ်လို့ ဆိုလာချိန်မှာလည်း ကျွန်မကတော့ လက်ကကိုင်ပြီး ဖတ်ရမှ အားရမိတယ်။ စာအုပ်တွေလက်က ကိုင်ပြီး ဖတ်တော့ ကိုယ်ရပ်ချင်တဲ့နေရာ ရောက်ရင် ခဏမှတ်ထား၊ လိုချင်တဲ့အချက်ကို မျဉ်းစားတတ်တဲ့ အကျင့်တွေနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်နေမိတာကိုး။ လက်ကကိုင်ဖတ်မှ စာဖတ်အရသာခံစားမိတော့ တကယ့်စာဖတ် အနှစ်သာရကို အပြည့်အ၀ခံစားရတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒီတော့ ခုထိ ဒီတိုင်းကိုင်ဖတ်နေတုန်းပါပဲ။ လက်က စာအုပ်ကိုင်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ အထင်တော့မကြီးလေနဲ့။ မ၀ယ်နိုင်တဲ့ဘ၀မို့ လက်ဆောင်ရတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ စာစောင်တွေကိုပဲ ဖတ်နေဖြစ်တာပါ။ တစ်ခါတလေ စာအုပ်ဈေးပွဲတော် လိုမျိုးပွဲတွေရှိရင်တော့ ပျော်မိတယ်။ အဲလိုချိန် ဆိုလိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ ၀ယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ကတောင်ကြာတော့ ပြောလာတယ်။ နင်မနေနဲ့တော့ နင့်စာအုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတာပဲတဲ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့ အရေးအသား ကြိုက်ပြီးဆိုရင် ခဏခဏ ကိုင်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အဲဖတ်ပြီးတဲ့စာအုပ်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေကိုတော့ ပရဟိတသွား လုပ်တဲ့အခါ ကျွန်မ ပြန်လည်ဝေမျှဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မပေးလိုက်တဲ့ ဘာမဟုတ်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို တယုတယနဲ့ လက်ခံပြီး သေသေချာချာဖတ်ရှုတာ မြင်ရတဲ့အခါ ကျွန်မ မျက်ရည်လည်အောင် ၀မ်းသာမိ ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့အကျင့်တစ်ခုကတော့ နှစ်ခုရှိရင်သူများကိုတစ်ခုပေးရမှကျေနပ်တတ်တဲ့အကျင့်ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ့်အတွက်အသုံးမ၀င်ရင် သူများအတွက် အသုံးဝင်မှာဆိုတဲ့အတွက် အမြဲတွေး ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေ သူများ ပရဟိတလုပ်လို့ ကိုယ့်မလုပ်ရရင် ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်အားမရဘူး။ ဘာကြောင့် သူများလို မလှူတန်းနိုင်ရတာလဲလို့လည်း စိတ်ကဖြစ်မိတယ်။ ခုတစ်လောဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့်က ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်တွေများတယ်။ စာအုပ်စင်လေးလုပ်ချင်တာလည်း ခုထိ မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ ငှားဖတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း ပေးဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အပြင်မှာမရှိတဲ့ စာအုပ်တွေကိုတော့ မ၀ယ်နိုင်တဲ့အတွက် အီးဘုတ်တွေဒေါင်းပြီး ဖတ်ပေးမယ့် အင်တာနက် အမြဲမသုံးနိုင်သလို ကွန်ပျူတာရှေ့လည်း အချိန်ပြည့်မထိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သိပ်ပြီးမဖတ်ဖြစ်မိဘူး။ တစ်ခါတလေ အွန်လိုင်းကနေ သူငယ်ချင်းတွေပို့ပေးတဲ့ အီးဘုတ်တွေလည်း ဒေါင်းပြီးဖတ်ချင်တဲ့အခါနဲ့ ကွန်ပျူတာသုံးနိုင်တဲ့အချိန်ကို အလုအယက်ဖတ်နေရတော့ အဆင်သိပ်မပြေလှပါဘူး။
စာတွေလည်း ရေးချင်စိတ်မရှိပေမယ့် တစ်ခါတလေ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် မတောက်တခေါက်ကလေးနဲ့ ကဗျာမဟုတ် ဘာမဟုတ်တာလေးတွေ စိတ်ကူးတည့်ရာ ရေးကြည့်မိတာကို ၀ိုင်းဝန်အားပေးကြတာ တွေ့ရပြန်တော့ ရေးချင်စိတ်မရှိတဲ့စိတ်က အလိုလိုရေးချင်စိတ်ပြန်လည်ဖြစ်လာတယ်။ စာရေးတတ်လားဆိုတော့ မရေးတတ်ပါဘူး။ စာဖတ်အားပဲ သန်ခဲ့တာ။ စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး စဉ်းစားခန်း ၀င်ရတာလည်း အမောပါပဲ။ ဒါနဲ့ဖတ်ချင်ရင် မနောမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေ ငှားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ရှိတဲ့ စာအုပ်တွေ ကတော့ သူများ ကြိုက်မကြိုက်တော့ မသိဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းစာရေးဆရာ စာအုပ်တွေတော့ မရှိပါဘူး။
ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲက စာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်း ကျွန်မ ပြောပြပါရစေ။ စာအုပ်နာမည်ကတော့ နေမင်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကတော့ ဆရာ ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း ရေးသားထားပြီး အမျိုးသားစာပေဆုရထားတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ သမိုင်းကြောင်း အစဉ်အဆက်ကို ကောင်စီခေတ်ထိ ရေးသားထားတဲ့စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ ရေးသားထားတာ ၉အုပ်ရှိပြီး ထုတ်ဝေခွင့်ရခဲ့တာကတော့ ၈အုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်အစက မြန်မာပြည်ကို ဘယ်သူတွေ လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။ ဘယ်အချိန် ဘယ်ဒေသမှာ ဘယ်သူခေတ်မှ ခေတ်အဆက်ဆက်နဲ့ ဆေးမင်ကြောင် ဘယ်ခေတ်က စတင် ထိုးကွင်းမင်ကြောင်များ ဖြစ်လာတာစတဲ့ မနောတို့လို မသိခဲ့ မမြင်ခဲ့ မကြားခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေအတွက် မြန်မာပြည် အနေအထားကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်တွေ့နေရသကဲ့သို့ ဖတ်ရှုရတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အိမ်တိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်အနေနဲ့ရှိနေသင့်တယ်လို့ မနောပြောချင်ပါတယ်။
စာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာတွေက ဇာတ်အဖွင့်မှာစပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆွဲဆောင်မှုရှိတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် နောက်ပိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့များ မြန်မာနိုင်ငံကို ကျွန်ပြု လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် ကျူးကျော်စော်ကားလာပုံ နောက်ခံသမိုင်းမှစပြီး ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာကို ဖတ်ရှုမိပါတယ်။ ရှေးခေတ် မြန်မာဓလေ့ မြန်မာ့စရိုက်၊ ရွာဓလေ့ ရွာ့စရိုက်၊ မြန်မာ့အတွေးအမြင်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ဒေသန္တရဗဟုသုတ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသင် ပညာရေး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသား ဘ၀၊ မြန်မာဂီတ၊ မြန်မာစာပေ၊ နန်းတွင်းဓလေ့၊ နန်းတွင်းယဉ်ကျေးမှု၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်၊ ခုခံရေးတိုက်ပွဲများ၊ တော်လှန်သောတိုက်ခိုက်မှုများ၊ ကြီးမြတ်သောသူရဲကောင်းတို့၏ သဘောထား၊ မဟုတ်မခံ မှန်သောသတ္တိ၊ အမျိုးသားသစ္စာဖောက်တို့၏ နိမ့်ကျသောစိတ်ထား၊ မတရားအနိုင်ကျင့်သူတို့၏ နိမ့်ကျသော လုပ်ရပ်များ၊ မျိုးချစ်စိတ်၏ ဂုဏ်ယူမြတ်နိုးဖွယ်များကို ကျယ်ပြန့်သော ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်များဖြင့် ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့နေဘိသကဲ့သို့ ဖတ်ရတဲ့အတွက် စာပေရဲ့ အနှစ်သာရကို အမှန်တကယ်ရရှိမိပါတယ်။ အလွန် ရက်စက်သော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ နောက်ပါတီအဖွဲ့အစည်းများ အကြောင်း အရာများအပြင် ဒီဝတ္ထုရဲ့ သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်းရာကျော် ရေးဖွဲ့ထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပဒေသရာဇ်မင်းငါးဆက်ခေတ်၊ ကျွန်ခေတ်၊ စစ်အတွင်းဖက်ဆစ်ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးခေတ်၊ ပြည်တွင်း စစ်ခေတ်၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်တို့ကို ဖြတ်သန်းဖော်ပြထားပြီး မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ထုံးဓလေ့များကိုလည်း ဖော်ကျူးထားတဲ့အပြင် အမျိုးသားစိတ်၊ အမျိုးသားအားမာန်တို့ကိုလည်း ပေါ်လွှင်အောင် ပုံဖော်ထားနိုင်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါပဲ။ အဖေမှသား၊ သားမှမြေး၊ မြေးမှ မြစ်၊ မြစ်မှ တီ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဇာတ်လမ်းဟာကွက်မရှိပဲ ကျွန်မလိုပိန်းတဲ့သူတောင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသကဲ့သို့ နားလည်ခံစားနိုင်အောင် ရေးဖွဲ့ထားပုံကတော့ တကယ့်ကိုအံ့မခန်းလို့ ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ် ဖတ်မိမှသာ မြန်မာပြည်မှာနေပြီး ဘယ်ချိန်က ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာဆိုတာကို သိမှတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်း ကျွန်မအတွက်တော့ အလွန်အဖိုးတန်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်လို့ပြောလိုက်ရပါတော့တယ်။
စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့အတိုင်း ရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ စာဖတ်ကြပါလို့ ဒီနေရာကနေ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ……
အခုပဲ ဒေါင်းပြီး ဖတ်လိုက်ပါတော့မယ်။
စာအုပ်တွေ လဲ ဖတ်ကြမလား ??
ဖတ်ပြီးပါပြီ။ စဖတ်ကတည်းက လက်ကမချနိုင်အောင် ဖတ်လိုက်တာ ၅ရက်နဲ့ပြတ်သွားတယ်… အဟီး
လာစီဖူ ဆိုတော့ တရုတ်နာမည်လား ဟင် :mrgreenn:
စေတန် သား က နေ
ဟုတ်ပါ့ ဇီရယ် ပြောပြလိုက်စမ်းပါ
lucifer ကိုစကားလိမ် ဖွဲ့ထားတာလို့
အင်း ဒီပုံတိုင်းဆို ဖြစ်သေးဘူး နာမည်ထပ်ပြောင်းအုံးမှပါ
တော်ကြာ စိနဂိုဏ်းထဲ ဆွဲထည့်နေအုံးမယ်
နိ နာမည်က မြန်မာလို အတည့် ရေးလို့ မကောင်းဘူးအေ့
ဂဒါမို့လို့ ဟိုလိုမရေးပဲ ဂလိုရေးတာကို
ဖောလင်း အိမ်ဂျယ် လို့သာရေးလိုက်ပါတော့ အေ။
အဲ့ လာစီဖူ ကို the morning star လို့လဲ ခေါ်သတဲ့…
(အဲ့ဒီ နာမည်လေး ပြောင်းပြီးမှ ကောင်မလေး လို့ အထင်ခံရရင်တော့ ကျနော်နဲ့ မဆိုင်… :))
အိမ်ကျယ်တော့ မလုပ်ပရဇီနဲ့ မမဂျီးရယ်
ဂျက်…တော်ကြာ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ထပ်မှားနေရင် ဘယ့်နှာလုပ်မတုန်း
burmeseclassic နဲ့ myanmarebooks.net အပြင် စာအုပ်ကောင်းကောင်းတင်တဲ့ ဆိုက်လေးတွေရှိရင် လမ်းညွှန်ကြပါအုံး
အဲ့ဒီ ၈အုပ်တွဲ ကို အီးဘွတ်ခ် နဲ့ ဖတ်ပလိုက်တာ ၅ရက်လားပဲ ကြာတယ်။
လူလဲ ကန်းခါနီး ဖြစ်သွားရော
စာအုပ် ဒေါင်းဖို့ကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မှာ
မောင်လေးကို ဒီ စာအုပ်တွေ သယ်ခိုင်းရင် အဆူခံရမယ် ထင်!
အဲဒီတော့ အီး တစ်ဘွတ်ဘွတ် ဒေါင်းပြီး ဖတ်ရုံပါ့!!
ကျေးကျေး နောနော နဲ့ ဂျက်ဂျက်
Hi5!!! thanks for the links but searching books on facebook is inconvenient
အာ့ဆိုလဲ အရှည် အရှည် မပြောနဲ့
ရော့ ဒီမှာ အပေါ် သုံးပေ့ခ်ျ ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် လင့်ခ် တွေ…
အဲဒီ လာစီဖူလည်း စလုံးမှာနေတာပဲဟာ။
ဘယ်နဲ့ ဘယ်လင့်ဖွင့်ရတယ် မရဘူး ရှိရသေးတုန်းး
Jack ရေ link တွေအတွက် ကျေးကျေး..
nyisay ထဲမှာ မဖတ်ရသေးတာ များဂျီးတွေ့တယ်….
link ဖွင့်မရဘူးလို့ ပြောပါဘူး မဇီရယ်
facebook က စာအုပ်ရှာလို့အဆင်မပြေဘူးပြောတာ
category, author နဲ့ရှာလို့မရတော့ တစ်မျှော်တစ်ခေါ်ကြီး scrolldown လုပ်ပြီးမှတစ်အုပ်ဆိုသလိုတွေ့တာကြောင့်ပါ
ကျေးဇူးပါ မနော၊ မဖတ်ရသေးဘူး။
လေးခ စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေမှာ ဒီလို စာအုပ်တွဲတွေ တင်လား။ မနောတို့ဘက်မှာတော့ ပေါ်ပင်စာပေတွေပဲ ငှားတယ်။ အခုဆို စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေတောင် ဆိတ်သုဉ်းလု နည်းနည်းဖြစ်နေပြီ။
နတ်နွယ် ရဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း နဲ့ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းသလဲ မသိဘူး။
နတ်နွယ်ရဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းလည်း မနောဆီမှာ စာအုပ်ရှိပါတယ်။ သူကျတော့ ခရီးသွားစာပေဆိုတော့ မတူပါဘူး။
အမငီး မမ မနော ရေ..နတ်နွယ်ရဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းက ခရီးသွားစာပေ
ဟုတ်ရပေါင် ခင်ဗျာ..။ အမှတ်မှား သလား အစ်မ…။
ဆော်တီး နောက်ထွက်တဲ့စာအုပ်နဲ့ မှားတာ… ဒီညတော့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း စာအုပ် ပြန်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်။ အခုပြန်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်က ရန်အောင်မောင်မောင်ရဲ့ ထောင်တစ်သက်အတွေ့အကြုံစာအုပ်ပါ။